Ny teny hoe Imanoela na Emanoela dia anarana hita ao amin' ny Baiboly, ao amin' ny Bokin' i Isaia (na Izaia) izay anondroan' ny mpaminany ilay zaza hateraka sy hanafaka ny Fanjakan' i Jodà. Amin' ny Kristiana dia i Jesosy io Imanoela io, ary ny andro nahaterahan' ny Mesia no andro nahaterahan' i Imanoela izay atao hoe Kristy, araka ny voasoratra ao amin' ny Evanjelin' i Matio.
2 Ao amin' ny Bokin' i Isaia (Is. 7–8)
3 Ao amin' ny Filazantsaran' i Matio (Mat. 1:22–23)
Ny anarana hoe Imanoela na EmanoelaHanova
Ny hoe Imanoela na Emanoela dia fanagasiana anarana avy amin' ny andalana ao amin' ny Baiboly jiosy amin' ny teny hebreo (Tanakh) hoe עִמָּנוּ אֵל / ‘immânû ’él izay midika hoe "miaraka amintsika Andriamanitra" na "hiaraka amintsika anie Andriamanitra". Anarana am-panoharana ny hoe ‘Immânû 'el. Io anarana io dia nadikan'ny Baiboly jiosy amin' ny teny grika (Septanta) amin' ny hoe Ἐμμανουήλ / Emmanouēl . izay voasana hoe μεθ ἡμῶν ὁ Θεός / meth êmôn o Theos "amintsika Andriamanitra". Ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy no ahitana ny hoe Imanoela fa ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy no misy ny hoe Emanoela.
Ao amin' ny Bokin' i Isaia (Is. 7–8)Hanova
Anarana anondroan' ny mpaminany ny Mesia nampanantenaina ny vahoaka Jiosy, araka ny Bokin' i Isaia (na Bokin' i Izaia) (Is. 7.14) ny hoe Imanoela na Emanoela. Tamin' ny vanim-potoana nitrangan' ny faminaniana an' i Imanoela dia natahotra ny horavànan' i Siria sy ny Fanjakan' i Israely (na Fanjakan' i Samaria) izay niady taminy teo anelanelan' ny taona 734 sy 733 tal. J.K. ny Fanjakan' i Jodà ka valin-teny nomen' Andriamanitra an' i Ahaza (na Akaza) mpanjakany izay nila torohevitra tamin' Andriamanitra izany faminaniana izany. Tsy nanambara mazava ny fotoana hahaterahan' ilay zaza hitondra ny famonjen' i Iahveh anefa ny mpaminany. Noho izany dia harovan' Andriamanitra ny Tranon' i Davida.
Tao amin' ny sehatry ny ady sirô-efraimita (taona 735--734 tal. J.K.) no niatrehan' ny Fanjakan' i Jodà ady tamin' ny Fanjakan' i Israely (atao hoe Efraima, ao amin' ny faminaniana) sy ny Fanjakana Siriana (izay atao hoe Arama na Arama-Damaskôsy). Ny Bokin' i Isaia (Is. 7.1-2) dia mitantara ny nanafihan' ny mpanjakan' i Efraima sy ny mpanjakan' i Siria an' i Jerosalema raha nanda ny hiaraka aminy ny mpanjaka Ahaza hanoherana ny Asiriana. Te hila vonjy amin' i Asiria i Ahaza, nefa, araka ny baikon' Andriamanitra dia naka ny zanany atao hoe שְׁאָר יָשׁוּב/ Shear-Yashub (Seara-Jasoba ao amin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy) (anarana am-panoharana midika hoe "Hisy sisa hiverina") ny mpaminany Isaia ka nilaza tamin' i Ahaza fa tsy hahomby ireo mpanjaka roa ireo (Is. 7.3-9).
Nitantara tamin' i Ahaza i Isaia ny amin' ny famantarana hahalalany fa marina izany faminaniana izany: "Indro, hanan' anaka ny zazavavy ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe עִמָּנוּ אֵל / ‘Immânû ’El (Imanoela na Emanoela) ("Andriamanitra amintsika"), ary "ho lao ny tanin' ireo mpanjaka roa maharaiki-tahotra anao ireo raha tsy mbola mahalala handà ny ratsy sy hifidy ny tsara izany zaza izany." (Is. 7.13-16).
Ny andininy manaraka dia misy faminaniana hafa koa izay ahitana fa nampiantso an' i Asiria hiady amin' i Jodà amin' ny fotoana mbola ho avy Andriamanitra: "I Iahveh hahatonga aminao sy ny olonao ary ny mpianakavin-drainao izay andro tsy mbola nisy toa azy hatramin' ny andro nialan' i Efraima tamin' i Jodà (dia ny mpanjakan' i Asiria)" (Isaia 7.17).
Mitantara ny fahavoazana hitranga ny andininy 18-25: "Ary amin' izany andro izany dia samy hiompy ombivavy kely sy ondry roa ny olona; Ary noho ny haben' ny ronono azo avy amin' ireo dia hihinana rononomandry izy; Fa rononomandry sy tantely no ho fihinan' ny olona sisa rehetra ao amin' ny tany. Ary amin' izany andro izany dia ho rakotry ny hery sy ny tsilo ny tany rehetra izay nisy voaloboka arivo nahazo sekely arivo." (17.21-23).
Ny Isaia 8.1-15 dia manohy ny toko eo alohany: mitantara ny hahaterahan' ny zaza iray hafa ny mpaminany, dia ny zanany atao hoe מַהֵר שָׁלָל חָשׁ בַּז / Maher-shalal-Hash-Baz (ao amin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy: Mahera-Salala-Hasi-Baza) (anarana am-panoharana ihany koa: "Avy faingana ny famaboana, mimaona ny fandrobana"), sady nilaza fa aorian' ny fandravana an' i Efraima sy an' i Siria dia ho tonga tahaka ny renirano be ny Asiriana "hanafotra sady mbola hisondrotra ihany mandra-pahatongany havozona; Ary ny fipasany eny an-daniny roa dia hanenika ny taninao, ry Imanoela ô" (Is. 8.8).
Misy anarana ara-paminaniana lava kokoa hita ao amin' ny Isaia (Is. 9.6), dia ny hoe פֶּלֶא יֹועֵץ אֵל גִּבֹּור אֲבִיעַד שַׂר־שָׁלֹֽום‬ / Pele-Yō‘êṣ-‘êl-Gibbōr-‘Ăḇî‘Aḏ-Sar-Shālōm izay midika hoe "Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain' ny mandrakizay Andrian' ny fiadanana". Ao amin' ny Baiboly maro, isan' izany ny Baiboly amin' ny teny malagasy, ka avy hatrany dia io dikany io no voasoratra fa tsy ilay "anarana" amin' ny teny hebreo.
Ny andininy ao amin'ny Isaia 7.1--8.15 dia tamin' ny andron' ny mpanjaka Ahaza (na Akaza) sady faminaniana momba ny mpanjaka roa atahoran' i Ahaza, dia i Peka sy i Rezina. Ny faharesena sy ny fahafatesan' ireo mpanjakaroa ireo tamin' ny fanafihan' ny Asiriana dia tany amin' ny taona 732 tal. J.K., ka ny nahaterahan' i Imanoela dia tokony ho tamin' ny fiafaran' ny fanapahan' i Ahaza.
Ny manampahaizana dia mihevitra fa ny nahavitana an-tsoratra ireo zava-nitranga ireo dia tamin' ny fanapahan' i Hezekia (na Ezekiasa) zanak' i Azaza, izany hoe telopolo taona taty aoriana, mba handresena lahatra an' i Hezekia tsy hikambana amin' ny mpanjaka hafa izay mikasa ny hikomy amin' ny fanjakana mpanjakazaka amin' izy ireo, dia ny Asiriana. Anterin' i Isaia ny loza vokatry ny nataon' ireo mpifanolo-bodirindrina amin' ny Fanjakan' i Jodà, dia ny Fanjakan' i Israely sy i Arama-Damasy (Siria) raha nikomy tamin' ny fotoan' i Ahaza. Tsy niraharaha an' i Isaia i Hezekia ka nikambana tamin' ireo mpikomy. Nanjary tanteraka ny zavatra nampitandreman'ny mpaminany: noravàn' ny Asiriana i Jodà ary saiky tsy afa-nandositra i Hezekia niaraka tamin' ny sezafiandrianany. Taonjato iray taty aoriana, tamin' ny fotoana nanjakan' i Josia, nasiam-panitsiana izany faminaniana izany mba hanehoana an' i Ahaza ho toy ny mpanjaka tsy mino fa nanary ny fampanantenam-piarovana avy amin' Andriamanitra, ka nahatonga an' Andriamanitra naniraka ny Asiriana handrava ny tany hatramin' ny hitsanganan' ny mpanjaka mahatoky (izay mety ho i Josia).
Ny Isaia 7-8 dia miresaka momba ireo zaza telo manana anarana am-panoharana, dia i Shear-Yashub sy i Immanu'El ary i Maher-shalal-hash-baz. Ny Isaia 8.18 mampahalala ny mpamaky fa ny mpaminany Isaia sy ireo zanany ireo dia famantarana ("Indreto, izaho sy ireo zaza nomen' i Iahveh ahy dia famantarana sy fahagagana ao amin' i Israely avy amin' i Iahveh, Tompon' ny maro, izay monina ao an-tendrombohitra Ziona."). Tsy mazava ny hevitr' ireo anarana ireo: ny hoe Shear-Yashub dia nahazo fivoasana samihafa: ny sisa amin' i Efraima sy amin' i Siria ihany no ho sisa velona amin' ny fanafihan' ny Asiriana, na ny sisa amin' i Jodà no hibebaka ka hiverina amin' Andriamanitra, nefa ao amin' ny Isaia 10.20-23 dia hoatry ny te hilaza fa ny sisa amin' i Israely no hiverina amin' ny fanjakan' i Davida. Ny anarana hoe Maher-shalal-hash-baz dia mazava tsarafa fa mifandray amin' ny faharavàn' i Efraima sy i Siria izay efa fantatra mialoha.
Ny anarana hoe Immanu'El kosa dia mety midika fotsiny fa ny zazavavy bevohoka rehetra tamin' ny taona 734 tal. J.K. dia samy afaka hanome anarana ny zanany hoe "miaraka amintsika Andriamanitra" amin' ny fotoana ahaterahany; nefa raha toa ka zaza iray ihany no resahina dia mety ho ny zanak' i Ahaza izany, angamba i Hezekia mpandimby azy (izay nadrasan' ny Jiosy tamin' izany fotoana izany); na satria ny zanaka ara-tandindona hafa dia zanak' i Isaia, i Immanu'El dia mety ho zanak' ilay mpaminany koa . Miova ny hevitr' io anarana io: ao amin' ny Isaia 7 dia tandindon' ny fanantenana ny faharesen' i Siria sy i Efraima ny anarana hoe Immanu'El, fa ao amin' ny Isaia 8.8 kosa dia tondroina ho firenena efa madiva hotafihin' ny Asiriana i Immanu'El .
Ao amin' ny Filazantsaran' i Matio (Mat. 1:22–23)Hanova
Hita ao amin' ny Evanjelin' i Matio (Mat. 1.23), izay mampahatsiahy ny voasoratra ao amin' ny Bokin' i Isaia mba hanamafisan' ny evanjelista fa i Jesosy avy any Nazareta no ilay Mesia. Ho an' ny Kristiana dia tsy iza i Imanoela fa ny Mesia atao hoe Kristy koa izay hanafaka ny olombelona amin' ny fangejan' ny fahavalony.
Ny Evanjelin' i Matio dia manao tonon-tsiahy ny faminanian' i Isaia momba an' i Imanoela, amin' ny fampiasana ny dikan-teny grika fa tsy ny dika fototra amin' ny teny hebreo. Manomboka amin' ny tetiaran' i Jesosy hatramin' i Abrahama mahafaoka an' i Davida i Matio, ka milaza fa "zanak' i Davida" i Jesosy (Mat. 1.1), isan' ny "tranon' i Davida" (Isaia 7.12) izay nomena ny famantaran' i Imanoela. Ny Matio 1.16 dia milaza fa tsy zanaka naterak' i Josefa i Jesosy, ary tsy miresaka an' i Jôsefa ho rain' i Jesosy i Matio. Ny andininy 1.18-25 dia mitodika any amin' i Maria, ilay ho renin' i Jesosy, fofombadin' i Jôsefa, nefa "hita fa nitoe-jaza avy tamin' ny Fanahy Masina" alohan' ny hiraisany trano amin' i Jôsefa (and. 18). Saika hanapaka ny fifamofoana i Jôsefa no nisy anjely niseho taminy tamin' ny alalan' ny nofy ka nilaza taminy fa avy amin' Andriamanitra izany zaza izany. Ny Matio 1.22-23 dia manambara fa fahatanterahan' ny Soratra Masina izany.
Nosoratan' olona mino ny maha Mesia an' i Jesosy ny Evanjelin' i Matio, dia ilay Mesia nampanantenaina, "Andriamanitra amintsika" . Tamin' ny voalohany, ny anaram-boninahitra sahala amin' ny hoe "Mesia" sy "zanak' Andriamanitra" dia nentina nanoritsoritra ny fomban' ilay Jesosy hoavy amin' ny fotoan' ny "deutera parousia" na fiaviany fanindroany; nefa tsy ela taty aoriana dia lasa natao hoe "Zanak' Andriamanitra" izy tamin' ny fitsanganany tamin' ny maty; avy eo ao amin' ny Evanjelin' i Marka izy dia tonga Zanak' Andriamanitra rehefa natao batisa; farany ny Evanjelin' i Matio sy ny Evanjelin' i Lioka nanampy fitantarana ny fahatanoran' i Jesosy ka milaza azy ho efa Zanak' Andriamanitra hatramin' ny voalohany indrindra, talohan'ny nitorontoronan' ny reny virijiny azy sady tsy nanana ray olombelona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Imanoela&oldid=1042797"
Dernière modification le 8 Janoary 2022, à 04:23
Voaova farany tamin'ny 8 Janoary 2022 amin'ny 04:23 ity pejy ity.